ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့ ၇၅ နှ စ်မြောက် မွေးနေ့ မှာ ကွီးဖြိုး က ဘာ လက်ဆောင်ပေး လိုက် လဲ …? – Let Pan Daily
ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အသက် (၇၅) နှစ်ပြည့် ပါ တယ် ။ ဒီမွေးနေ့မှာ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် က အဝေးရောက် မြန်မာများက လဲ အမေစု ကျန်းမာပါစေ ဆိုပြီး ဆုတောင်းကြတာ တွေ့ရ ပါ တယ် ။ ပြည်သူတွေက ချစ်ကြတာ ကတော့ အင်မတန် မှ သိသာ ပါတယ် ။ ကွီးဖြိုး က သူ့ အမေ DASSK ကို ဘာလက်ဆောင်ပေးလဲ…?
DASSK ဟာ ကွီးဖြိုး ကို ရန်ကုန်တိုင်း ကို အုပ်ချုပ် ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ရွေးချယ်ရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကို နောက်ကြောင်းလိုက်ပြီး တိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကွီးဖြိုးဟာ ဒီမိုကရေစီ အတွက် ယုံကြည်ချက် နဲ့ ထောင်ကျခံခဲ့သလို ခရိုနီတွေ နဲ့ လုံးဝ ကင်းရှင်းခဲ့လို့ သူ့ရဲ့ CV ဟာ ကောင်း ခဲ့ပြီး ရန်သူက နောက်ကြောင်းရှာ တိုက် မရခဲ့ပါ။
သူအုပ်ချုပ်ချိန် မှာ အလုပ်သမား ကိစ္စ၊ ကျူးကိစ္စ ကို ညင်သာစွာ ဖြေရှင်းပြီး အဆိုပါ ကိစ္စတွေကနေ အမေရိကန်က George Floyd ကိစ္စလို အကြီးအကျယ် မဖြစ်အောင်ထိန်းပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဘာပြဿနာကို ရှင်းရှင်း ရဲနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ကို သုံးရမှာဖြစ်ပြီး ရဲလုပ်တာ မှားရင် အမေရိကန်မှာလို အမှိုက်ကစမီးလောင်သွားနိုင် ပါတယ်။ အမေရိကန်က ရဲဟာ အခြားတိုင်း ပြည်တွေက ထက်တော်ပြီး မြို့တော်ဝန်အောက်မှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ ။ ဒါတောင် ရဲကနေ ပြဿနာတက်ခဲ့ ပါတယ် ။ အမေရိကန်လို မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ် သွားမလဲ အားလုံး သိမှာပါ ။ သူက တပ်ဟာ အစိုးရအောက် မှာ မရှိဘူးဆိုတာကို ညွှန်ချုပ်ကိစ္စနဲ့ပြခဲ့ လို့ တိုင်းပြည်ဟာ စီးပွါးရေး အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ကနေ လောလောဆယ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ စာဖတ်သူများ အနေ နဲ့ ဒါတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ငြင်းနိုင် ပါတယ် ။
အဓိက ကတော့ မနေ့က သူ့ကိုဖွတ်နဲ့တပ်က လွှတ်တော် မှာ စွတ်စွဲပြစ်တင် ရတဲ့ ကိစ္စကနေ သက်သေပြသွားတာ တစ်ခုပါ ။ သူတက်လာက ထဲ က နာရီကိစ္စနဲ့ သူ့ရဲ့ စာရိတ္တကို လူတွေ အထင် မှားအောင် လုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်ကောလဟာလ ထုတ်ပြီးလဲ သူ့ ရဲ့ အကျင့်သီလ ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ် ။
ကွီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ထောက်လှမ်းပြီး အောက်လမ်းက လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။ သတင်းသမားတွေကို မမှန် သတင်းပေးခဲ့ပြီး သတင်းသမားတွေ က ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီ ဖွဖို့ ရှာဖွေကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သက်တမ်းလေးနှစ်ကျော် အထိ ဘာမှ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ ။ အဘတို့ဟာ ကွီးမပြော နဲ့ DASSK ခြံထဲ ဘာဝင်လဲအကုန်သိပါတယ် ။ အနည်းငယ် လုပ်နည်း မှားရင်တောင် အဂတိက ဟိုဝန်ကြီးတွေကို ဘယ်လိုစစ်ခဲ့လဲ မှတ်မိမှာပါ။ အဂတိကလဲ မိုးကျတွေပါ ။ ဦးပိုင်ရှယ်ယာရှင်လေးတွေပေါ့ ။ ကွီးမှားရင် ကိုင်ပြီလေ ။ ဒါပေမယ့် လေးနှစ်ကျော် မြေလှန်ရှာအပြီးမှာ ဘာအပြ စ်မှ အောက်လမ်းနည်း နဲ့ ရှာမရလို့ မနိုင်မှန်း သိလျက် နဲ့ လွှတ်တော်မှာ အယုံအကြည်မရှိအဆို မဲခွဲရတဲ့ အထိဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ။
ဒါကြောင့်မိုလို့ DASSK အတွက် ကွီးဖြိုးက ပေးတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင် ကတော့ သီလ သမာဓိရှိစွာ နဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန် ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ ဒိါကိုမနေ့က ပြသလိုက်တာပါဘဲ ။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကွီးဖြိုး ကို ကောလဟာလတွေ၊ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံသတင်းတွေ နဲ့ လုပ်လို့ မရတော့ဘဲနောက်ဆုံးမှာ မနိုင်မှန်းသိပေမယ့် ငါးမရ ရေချိုးပြန် ခဲ့ကြ တာပါ ။ ရေချိုးခွင့်တောင် မရခဲ့လိုက်ပါ ။
အမေစု ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး အသက်ရာ ကျော်ရှည် ပြီး တိုင်းပြည် တာဝန် ကို ခရိုနီ နဲ့ မပတ်သက်ခဲ့သူများ တိုင်းပြည် အတွက် မှတ်ကျောက်တင် ခံနိုင်သူများ နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင် ပါစေ။ အနားက မိုးကျများ ရဲ့ လိမ်လည်ခံရခြင်း မှလဲ ကင်းဝေးပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုလိုက် ပါတယ် ။
Myat Tun Oo ( လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် )
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ့ ရဲ့ ၇၅ နှ ဈမွောကျ မှေးနေ့ မှာ ကှီးဖွိုး က ဘာ လကျဆောငျပေး လိုကျ လဲ …?
ယမနျနကေ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရဲ့ အသကျ (၇၅) နှဈပွညျ့ ပါ တယျ ။ ဒီမှေးနမှေ့ာ ကမ်ဘာ အရပျရပျ က အဝေးရောကျ မွနျမာမြားက လဲ အမစေု ကနျြးမာပါစေ ဆိုပွီး ဆုတောငျးကွတာ တှရေ့ ပါ တယျ ။ ပွညျသူတှကေ ခဈြကွတာ ကတော့ အငျမတနျ မှ သိသာ ပါတယျ ။ ကှီးဖွိုး က သူ့ အမေ DASSK ကို ဘာလကျဆောငျပေးလဲ…?
DASSK ဟာ ကှီးဖွိုး ကို ရနျကုနျတိုငျး ကို အုပျခြုပျ ဖို့ ရှေးခယျြခဲ့ ပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ရှေးခယျြရငျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ကို နောကျကွောငျးလိုကျပွီး တိုကျလေ့ ရှိပါတယျ။ ကှီးဖွိုးဟာ ဒီမိုကရစေီ အတှကျ ယုံကွညျခကျြ နဲ့ ထောငျကခြံခဲ့သလို ခရိုနီတှေ နဲ့ လုံးဝ ကငျးရှငျးခဲ့လို့ သူ့ရဲ့ CV ဟာ ကောငျး ခဲ့ပွီး ရနျသူက နောကျကွောငျးရှာ တိုကျ မရခဲ့ပါ။
သူအုပျခြုပျခြိနျ မှာ အလုပျသမား ကိစ်စ၊ ကြူးကိစ်စ ကို ညငျသာစှာ ဖွရှေငျးပွီး အဆိုပါ ကိစ်စတှကေနေ အမရေိကနျက George Floyd ကိစ်စလို အကွီးအကယျြ မဖွဈအောငျထိနျးပေးခဲ့ ပါတယျ။ ဘာပွဿနာကို ရှငျးရှငျး ရဲနဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှေ ကို သုံးရမှာဖွဈပွီး ရဲလုပျတာ မှားရငျ အမရေိကနျမှာလို အမှိုကျကစမီးလောငျသှားနိုငျ ပါတယျ။ အမရေိကနျက ရဲဟာ အခွားတိုငျး ပွညျတှကေ ထကျတျောပွီး မွို့တျောဝနျအောကျမှာ ရှိတဲ့ အဖှဲ့အစညျးပါ ။ ဒါတောငျ ရဲကနေ ပွဿနာတကျခဲ့ ပါတယျ ။ အမရေိကနျလို မွနျမာပွညျမှာဖွဈခဲ့ရငျ ဘာဖွဈ သှားမလဲ အားလုံး သိမှာပါ ။ သူက တပျဟာ အစိုးရအောကျ မှာ မရှိဘူးဆိုတာကို ညှနျခြုပျကိစ်စနဲ့ပွခဲ့ လို့ တိုငျးပွညျဟာ စီးပှါးရေး အလုံးစုံ ပိတျဆို့မှုဒဏျကနေ လောလောဆယျ ကာကှယျပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ စာဖတျသူမြား အနေ နဲ့ ဒါတှဟော တိုကျဆိုငျမှုလို့ ငွငျးနိုငျ ပါတယျ ။
အဓိက ကတော့ မနကေ့ သူ့ကိုဖှတျနဲ့တပျက လှတျတျော မှာ စှတျစှဲပွဈတငျ ရတဲ့ ကိစ်စကနေ သကျသပွေသှားတာ တဈခုပါ ။ သူတကျလာက ထဲ က နာရီကိစ်စနဲ့ သူ့ရဲ့ စာရိတ်တကို လူတှေ အထငျ မှားအောငျ လုပျခဲ့ ပါတယျ ။ နောကျကောလဟာလ ထုတျပွီးလဲ သူ့ ရဲ့ အကငျြ့သီလ ကို တိုကျခိုကျဖို့ကွိုးစား ခဲ့ပါတယျ ။
ကှီးကို နညျးမြိုးစုံနဲ့ထောကျလှမျးပွီး အောကျလမျးက လုပျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ ပါတယျ ။ သတငျးသမားတှကေို မမှနျ သတငျးပေးခဲ့ပွီး သတငျးသမားတှေ က ကငျြ့ဝတျနဲ့မညီ ဖှဖို့ ရှာဖှကွေိုးစားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သကျတမျးလေးနှဈကြျော အထိ ဘာမှ ရှာမတှခေဲ့ပါ ။ အဘတို့ဟာ ကှီးမပွော နဲ့ DASSK ခွံထဲ ဘာဝငျလဲအကုနျသိပါတယျ ။ အနညျးငယျ လုပျနညျး မှားရငျတောငျ အဂတိက ဟိုဝနျကွီးတှကေို ဘယျလိုစဈခဲ့လဲ မှတျမိမှာပါ။ အဂတိကလဲ မိုးကတြှပေါ ။ ဦးပိုငျရှယျယာရှငျလေးတှပေေါ့ ။ ကှီးမှားရငျ ကိုငျပွီလေ ။ ဒါပမေယျ့ လေးနှဈကြျော မွလှေနျရှာအပွီးမှာ ဘာအပွ ဈမှ အောကျလမျးနညျး နဲ့ ရှာမရလို့ မနိုငျမှနျး သိလကျြ နဲ့ လှတျတျောမှာ အယုံအကွညျမရှိအဆို မဲခှဲရတဲ့ အထိဖွဈခဲ့ရတာပါ ။
ဒါကွောငျ့မိုလို့ DASSK အတှကျ ကှီးဖွိုးက ပေးတဲ့မှေးနလေ့ကျဆောငျ ကတော့ သီလ သမာဓိရှိစှာ နဲ့ တိုငျးပွညျတာဝနျ ကို ထမျးဆောငျခဲ့တာဖွဈ ပါတယျ။ ဒိါကိုမနကေ့ ပွသလိုကျတာပါဘဲ ။ သူတို့ဟာ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ ကှီးဖွိုး ကို ကောလဟာလတှေ၊ မဟုတျမမှနျလုပျကွံသတငျးတှေ နဲ့ လုပျလို့ မရတော့ဘဲနောကျဆုံးမှာ မနိုငျမှနျးသိပမေယျ့ ငါးမရ ရခြေိုးပွနျ ခဲ့ကွ တာပါ ။ ရခြေိုးခှငျ့တောငျ မရခဲ့လိုကျပါ ။
အမစေု ကနျြးမာ ခမျြးသာပွီး အသကျရာ ကြျောရှညျ ပွီး တိုငျးပွညျ တာဝနျ ကို ခရိုနီ နဲ့ မပတျသကျခဲ့သူမြား တိုငျးပွညျ အတှကျ မှတျကြောကျတငျ ခံနိုငျသူမြား နဲ့ လကျတှဲဆောငျရှကျနိုငျ ပါစေ။ အနားက မိုးကမြား ရဲ့ လိမျလညျခံရခွငျး မှလဲ ကငျးဝေးပါစေ လို့ ဆန်ဒပွုလိုကျ ပါတယျ ။
Myat Tun Oo ( လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ )
မင်းသားကြီး ဦး ကျော်ဟိန်းရဲ့ သမီး မခင်ခင်ခ ပြောပြတဲ့ ဦးဇင်းကြီးဘဝ နောက်ဆုံးအချိန်အကြောင်း